नहरको पानीले गाउँ झिलिमिली – Gaule Media ::
पोखरामा बुस्टर खोप लगाउने कार्य सुरु, भोली ७ गते पनि लगाइने
पोखरामा सात दिने आधारभूत पत्रकारीता तालिम सम्पन्न
लेखनाथ सामुदायीक सेवा केन्द्रको समाज सेवामा महत्वपुर्ण योगदानः वडा अध्यक्ष गुरुङ,
रत्न शोभामा माघ ४ गते खोप लगाइने
पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघको सचिवमा कास्कीकी शर्मा निर्वाचित
आमसञ्चार विधेयक पत्रकारको हितमा ल्याइने ः मन्त्री थापा
कोभिडको प्रभाव बढेसँगै माघ १३ देखी आयोजित लेखनाथ महोत्सव स्थगित
डा.रमिल अधिकारी कोभिड–१९ रेस्पोन्स टिमको प्रिन्सिपल एडभाइजरमा नियुक्त
विकृति , विसंगती रहित समाज निर्माणम साझा संकल्प आवश्यकः वडा अध्यक्ष दियाली
सीमामा कडाई, उडान स्थगित हुनसक्ने
Home/अन्य/नहरको पानीले गाउँ झिलिमिली
नहरको पानीले गाउँ झिलिमिली
ramsharan१८ कार्तिक २०७४, शनिबार ०५:०६
१८ कात्तिक, पोखरा । नहरमा बगेको पानीबाट निकालिएको बिजुलीले पोखराको वडा नम्बर १७ झिलीमिली भएको छ ।
राममन्दिर नजिकको नहरमा बगेको पानीबाट बिजुली निकालिएको हो । फेवा तालबाट गएको नहरमा बगेको पानीमा पिको हाइड्रो काइनेटिक पावर जेनेरेटर ‘काप्पा’को प्रयोग गरेर विजुली निकालिएको हो ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, जाइका, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा इवासेइको संयुक्त पहलमा जापानबाट ल्याइएको उक्त काप्पाको प्रयोग गरेर २ सय वाट विजुलीले राम मन्दिरमा बिजुली जोडिएको छ ।
शुक्रबार साँझ एक कार्यक्रमबीच कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले परियोजनाको उदघाटन गरेका हुन् । उदघाटन गर्दै उनले यस्ता परियोजनाले नेपालका विकट क्षेत्रमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे ।
नेपालस्थित जापानी राजदूतावासका सल्लाहकार नारुओ काटेले जापान सरकार नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लागनी गर्न इच्छुक रहेको धारण राखे । उनले यसका लागि अहिले नेपालमा वातारण निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा अगामी दिनमा जापानी लगानी अझै बढ्ने उनले बताए ।
जाइकाका आवासिय प्रतिनिधि जुन साकुमाले पोखरामा सन् २०२२ सम्ममा शुद्ध पानी उपलब्ध गराउने योजना रहेको सुनाए ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रतिनिधि रणबहादुर थापाले राममन्दिरमा प्रयोग गरिएको काप्पा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जापानबाट ल्याइएको जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार, नेपालमै यो प्रविधि विकास गर्न काठमाडौंको नेपाल यन्त्रशाला र बालाजु यन्त्रशालामा अभ्यास भइरहेको छ । ‘नेपालमा नै यसका सामग्री निर्माण गर्न सके ४ लाख रुपैयाँ लागतमा २ सयदेखि ४ सय वाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ’, थापाले भने ।
सुत्केरीको मृत्युपछि आन्दोलन, गण्डकी मेडिकल कलेजको दर्ता खारेजीको माग, ७ दिनदेखि आन्दोलन जारी
२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०४:३०
लकडाउन प्रभावकारी बनाउन बागलुङमा सेना परिचालन
१२ चैत्र २०७६, बुधबार ०२:५०
मतदाताले नै उम्मेदवारको हातमा पैसा थमाए !
२३ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०४:३२
७ श्रावण २०७५, सोमबार १५:५७
हतियारसहित कसरी छिरे भारतीय ?
१८ कार्तिक २०७४, शनिबार ०९:४५
६ माघ २०७८, बिहीबार १७:३१
४ माघ २०७८, मंगलवार १९:५४
३ माघ २०७८, सोमबार २०:५१
३ माघ २०७८, सोमबार १९:५६
१ माघ २०७८, शनिबार १९:३३